Benzani Abathengisi Bedijithali?
Wenzani umaka wedijithali?
NgoLwesine, ngoMashi 19, 2015 NgoMgqibelo, ngoMeyi 7, 2016 Douglas Karr
Ake sivule ngokusho ukuthi benginomsebenzi walomuntu ongezansi, heh. Njengomakethi wedijithali, sijikeleza wonke amaklayenti ethu masonto onke, sihlaziya ukusebenza kwawo, senze ukulungisa, sicwaninge, sihlele futhi senze imikhankaso yeziteshi eziningi. Sisebenzisa amathuluzi kakhulu kunalokhu kuchazwa yi-infographic - kusuka kwezokuxhumana, kuya ekushicileleni, kumathuluzi wokuthuthukisa nokuhlaziya.
I-IMO, iningi labakhangisi lisebenza endaweni abakhululeke kuyo kakhulu. Akuyona into engaqondakali ukuthi leso siteshi sibasebenzele kahle kakhulu ngoba yiso abanekhono labo kulo. Ukuba nekhono lokuhlaziya eliqinile mhlawumbe kuyimpahla engaphansi kakhulu kubathengisi bedijithali namuhla ngoba kuyabasiza ukuthi babone ngale kwendawo yabo yokunethezeka futhi babone ukuthi yimaphi amathuba noma izikhala ezitholakala ngezinye izindlela. Akukona nje ukuthi isiteshi esisodwa sisebenza kahle kanjani, kungukuthi zonke iziteshi zingasebenza kahle kangakanani uma bezishayelwe kahle.
Kude kude nekhono elilula lokusebenzisa imithombo yezokuxhumana, ukumaketha kwedijithali kudinga ukuqonda imikhuba yabathengi kanye nezisusa, amandla okuhlanganisa analytics, nokuxhumana ngempumelelo namakhasimende. Bheka ukuthi ukumaketha kwedijithali kuyini ngempela, kungani kubalulekile, usuku-empilweni yomthengisi wedijithali nokuthi ungangena kanjani kulo mkhakha.
Abathengisi bedijithali banesibopho, ekugcineni kosuku, sokwakha ukuqwashisa, ukuhlinzeka ngocwaningo kumathemba, nokushayela amathemba afanelekile ekuguqulweni. Lowo msebenzi unzima kakhulu namuhla kunangonyaka odlule. Amapulatifomu athuthuka aba yizindawo zokumaketha ezihlanganisiwe, idatha enkulu futhi idatha yokusakaza banikela ngamathuba esikhathi sangempela wokulungiswa kokumaketha, futhi izethameli ezahlukahlukene ezinhlobonhlobo zeziteshi namadivayisi zengeza ubunzima obungapheli ukuthola umlayezo ofanele kumuntu ofanele ngesikhathi esifanele.
Lokho kusho, abathengisi abaningi bedijithali nabo bamane bagxile endaweni eyodwa, kanti abanye bayathanda i-ejensi yethu gxila ekushayeleni ngokulingana kwamasu. Sibe sesiletha ochwepheshe etafuleni ukuze basize ngokuhlanganiswa, ukusebenzisa i-automation, ukuxhumana nokwenza lezo zindlela noma sisebenzisane nethimba lezokumaketha elivele likhona enkampanini.
Tags: usuku empilweniusuku empilweni yomthengisi wedijithaliumakethi wedijithaliinfographicumakethiwenzani umthengisi wedijithali
Imibandela Yokufuna Ebiza Kakhulu Ebiza Kakhulu nge-Bing - Nokuthi Ungayibalekela Kanjani